TriggerMesh ayaa sii daayay koodhka isha ee madal is -dhexgalka daruuraha hooyo | Laga soo bilaabo Linux
TriggerMesh ayaa siidaysay koodhka isha ee daruurtiisa madal is -dhexgalka hooyo
Xulka wararka oo dhan | 11/10/2021 12:39 | La cusbooneysiiyay 15/10/2021 03:12 | Noticias
TriggerMesh, oo ah madal Kubernetes hooyo ah in shirkaduhu u adeegsadaan inay ku xiraan codsiyada iyo xogta deegaannada daruuraha badan, dhawaan la sii daayay in madalkiina isdhexgalka dhexe waxaa hadda lagu heli karaa shati il ​​furan.
TriggerMesh waa shirkad la aasaasay 2018 iyo waxay u oggolaanaysaa adeegsadayaasha Kubernetes inay si fudud u dhexgalaan adeegyada una guuraan macluumaadka guud ahaan ururkaaga, haddii ay isticmaalayaan daruur keliya, daruuro badan, ama xarumo xog-dhisme.
Mashruuca isdhexgalka TriggerMesh waxay u sahlaysaa shirkadaha inay isku xiraan codsiyada ku socda daruuraha kala duwan iyo xarumaha xogta deegaanka. Taasi waa muhiim, maxaa yeelay inta badan codsiyada ganacsiga waa in lagu daraa codsiyada kale si loo qabto hawlaha ganacsiga.
Tusaale ahaan, codsiga gorfaynta iibku wuxuu u baahan doonaa inuu ka soo saaro diiwaannada wax iibsiga kaydka macmiilka si loo abuuro saadaasha dakhliga. Si loo suurtogeliyo is -dhexgalkaas, horumariyayaashu caadiyan waxay dhisi doonaan is -dhexgal u dhexeeya labada arji ee kala duwan.
Dhibaatada ay shirkaduhu qabaan ayaa ah in maalmahan ay wadaan barnaamijyo badan oo lagu marti qaaday deegaanno kala duwan. Sidaa darteed, dad badani waxay isku arkaan xaalad ay tahay inay ku xiraan aaladda daruur-martigelisay ee aaladda-adeeg-adeeg oo leh codsiyada ka socda dhismaha. Haddii kale, waxay u baahnaan karaan inay isku xiraan laba culeys shaqo oo la geeyay daruuraha kala duwan.
"Anigoo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee mashruuca Apache CloudStack iyo aasaasaha qaab-dhismeedka Kubeless ee aan lahayn server-ka Kubernetes, waxaan si qoto dheer u aaminsanahay in horumarinta ilaha furan iyo qaabka qaybinta ay tahay habka ugu wanaagsan ee loogu gudbiyo software-ka daruuriga," ayuu yiri TriggerMesh Co-Founder iyo Aasaasaha .. Maareeyaha wax soo saarka Sebastien Gosguen.
Kaustubh Das, oo ah ku-xigeenka sare madaxweyne Maareeyaha Guud, Cloud and Computing at Cisco.
Isku -darka dhismaha ee barnaamij kasta waxay qaadan doontaa waqti aad u dheer, sidaa darteed Aaladaha sida TriggerMesh waxay bixiyaan ikhtiyaar sahlan. Madasha isdhexgalka TriggerMesh tWaxay leedahay daraasiin ka mid ah sanduuqyada is-dhexgalka ee daruuraha dadweynaha sida Adeegyada Shabakadda Amazon, Codsiyada SaaS caan ah sida Slack, keydka macluumaadka iyo aaladaha kale. Sidaa darteed, shirkaduhu waxay si fudud u qaadan karaan is -dhexgalkii hore loo dhisay ee ay u baahnaayeen si ay isugu xiraan codsiyada kala duwan ee ay adeegsadaan, iyadoon loo eegayn jawiga ay ku jiraan.
TriggerMesh waxay wax walba ku fududaynaysaa “dhibic oo guji” interface, kaas oo horumariyayaashu u adeegsan karaan inay si dhakhso leh u habaystaan ​​sida qulqulka shaqooyinkaasi isugu dhafan yihiin. Tusaale ahaan, iskuxirayaasha TriggerMesh waxaa loo qaabayn karaa inay si otomaatig ah dab uga jawaabaan dhacdooyin gaar ah. Sidaa darteed, marka diiwaannada wax iibsiga lagu daro keydka macmiilka ee maxalliga ah, diiwaankaas la cusbooneysiiyay ayaa si otomaatig ah loogu diri doonaa madal falanqeyn oo ku taal AWS.
TriggerMesh waxay damacsan tahay inay lacag samayso iyadoo iibinaysa kaalmooyin iyo adeegyo lagu daray ee isha furan TriggerMesh Platorm. Waxa kale oo ay iibisaa aaladaha sida garaafka adeegsadaha garaafyada oo leh tifaftiraha is -dhexgalka muuqaalka, iyo sidoo kale oggolaanshaha meheradda iyo aaladaha xaqiijinta.
“TriggerMesh waa tusaale weyn. Waxaan aragnaa is-dhexgalkeeda iyo tikniyoolajiyadda otomaatiga oo fidineysa awoodda Adeegga Intersight Kubernetes, qayb ka mid ah Cisco Intersight, oo bixisa daruuro dhexdhexaad ah, otomaatiga badan iyo awoodaha hawl-maalmeed-2 ee codsiyada daruuriga ah. Waxaan rajeyneynaa inaan la shaqeyno TriggerMesh si aan gacan uga geysanno u wareejinta macaamiisha xilliga daruuriga, iyada oo aan loo eegin meesha kaabayaashooda la geeyay. ”
Maamulaha TriggerMesh Mark Hinkle wuxuu intaas ku daray in shirkaddu ay had iyo jeer qorshaynayso inay ka abuurto madal madalkeeda, laakiin ay ka taxaddarto inay doorato aasaaska softiweerka ee saxda ah si loo hubiyo sii wadidda guusha mashruuca.
Doorashada saldhigga waxay noqon kartaa go'aan adag, sida uu sharaxay falanqeeyaha maamulaha RedMonk Stephen O'Grady.
"In kasta oo warshaduhu u egtahay inay ka wada hadlaan 'il furan' sidii haddii ay tahay hay'ad keli ah, xaqiiqdu waxay tahay in ereygu uu ka kooban yahay shatiyo iyo habab kala duwan, oo mid walba leeyahay xuquuq iyo waajibaadyo kala duwan oo adeegsadayaashu ay tixgeliyaan." . “Si kastaba ha noqotee, shatiyada ilaha furan ee la ansixiyay, laga yaabee inaysan midna ku fiicnayn shirkadda dhexdeeda sida nooca 2 ee shatiga software -ka Apache. Laga soo bilaabo dabeecaddeeda oggolaanshaha ilaa ilaalinteeda shatiga, shatiga Apache waa xulasho aad u fiican oo loogu talagalay softiweer loogu talagalay inay adeegsadaan shirkaduhu isla markaana si wadajir ah loo horumariyo.
Ugu dambayntii haddii aad xiisaynayso inaad awood u yeelato inaad dib u eegto koodhka isha, waad samayn kartaa ka soo xiriir khadkan hoose.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » TriggerMesh ayaa siidaysay koodhka isha ee daruurtiisa madal is -dhexgalka hooyo
Linux Foundation waxay ka heli doontaa OpenSSF $ 10 milyan oo maalgelin ah si kor loogu qaado amniga isha furan
Imaanshaha FLoC waxay yeelan doontaa dib -u -dhac yar, laakiin imaanshaheeda waxay noqon doontaa mid aan laga fursan karin